Matipi gumi ekuti ungave sei Hutano Wiricheya | Karman® Mawiricheya
Ngatitorei yakadzika dhiza kuti ungave sei hutano wiricheya mushandisi. Munyika izere nezvikafu zvinonaka zvisina hutano, kuramba uine hutano haisi mararamiro ari nyore kutora. Saizvozvo, kuve mutano se wiricheya mushandisi munyika yezvinonaka zvekudya zvisina hutano ndeye mararamiro akaoma kutevera. Dambudziko rakajairika pakati vanoshandisa wiricheya kufutisa, chinova chinhu chiri chose wiricheya mushandisi unofanira kudzivisa.
Vamwe vakatanga kushandisa mavhiripu pakuzvarwa, nepo kune vamwe, kuve mukati wiricheya akauya gare gare mukati upenyu mushure mekukanganisa, uye kune vamwe, zvinogona kunge zvakauya nekuda kwechirwere. Zvisinei, kuva mukati wiricheya hapana chekunyara nacho kana kuora moyo nezvacho.
Matambudziko ane chekuita nekurema anowanzo kutaurwa mukati vanoshandisa wiricheya. Ipo vamwe vanotamburawo nenyaya dzehutano hwepfungwa kupfuura vamwe. Kunyangwe zvese izvi, izvi hazvifanirwe hazvo kuva zvako ezvinhu. Aya anotevera akanaka matipi ehutano anozviita zvinogoneka nokuti wiricheya mushandisi kurarama anofara uye anogutsa upenyu. Ngatitangei maitiro ekuve hutano wiricheya mushandisi.
1. Shingairira muKurovedza muviri
Kuita mumoyo kurovedza ndiko inobatsira moyo wako nemapapu. Chinangwa ndechekuramba uchirovedza muviri kusvikira moyo wako wakwira, uye unodziya zvakakwana kuti utange kudikitira. Kudzidzira kwakadaro inosanganisira asi haina kuganhurirwa kushambira, kutamba basketball, kana wheelchair sprint, izvo zvese wiricheya mushandisi anofanira kuita nguva dzose.
2. Wana Kurara Kwakanaka Kweusiku
Imwe nzira yakapusa yehutano ndeyekurara zvakanaka usiku. Dambudziko rekutanga iro rinowanzo simuka kuchinja pamubhedha kubva pa wiricheya. Zvakadaro, inogona kugadziriswa nekugadzirisa iyo wiricheya zvinoenderana nekukwirira kwemubhedha uye kufambisa zvigaro zvekumusoro kumusoro kuti zviite nyore kumutarisiri kusimudza, kutsvedza uye kufambisa iyo wiricheya mushandisi pamubhedha. kushandisa akanyorova mapiro nemakusheni anogona kubatsira mukutsvaga nzvimbo yakasununguka kuitira kuti uwane kurara kwakanaka kwehusiku.
3. Tambanudzira hutano hwepanyama
Chengetedza yako kufamba nekuchengeta majoini ako achichinjika kuburikidza nekutambanudza, izvo inoda iwe kuti ubate kutambanudza kwemasekondi makumi matatu. Zvishoma zvinotambanudzwa zuva rega rega zvakabatanidzwa mune zvako zvechinyakare zvinovimbisa kuti muviri wako wakasununguka kana uchifambiswa munzira dzakawanda uye inovandudza muviri kutenderera. Kutambanudza ndeimwe yemazano akanakisa evakadzi. Kutambanudza kunobatsira uye kunodikanwa kune vese wiricheya vanoshandisa.
4. Deredza MaCalori & Enda pane Kudya nemaLow Calories.
Sezvo a wiricheya mushandisi, zvinogara zvichinetsa kuchengetedza huremu hune hutano sezvo usiri wekufambisa seusinga-wiricheya mushandisi. Chinhu chakanakisa kuita kuve nechokwadi chekuti chakaderera-koriori chikafu, michero, uye miriwo zvinosanganisirwa mukudya kwako kwezuva nezuva. Zvakare, ipa pekutanga kuzvikafu zvine mapuroteni kana makabhohaidhiretsi pane zvekudya zvine mafuta mazhinji nekuti izvo zvine mafuta akawanda zvine macalorie akawanda. Semuenzaniso, yakasviba vegan chikafu chikafu chinobatsira mukucheka macalorie uye nekuwedzera zvinovaka muviri. Iyo TR90 uye iyo yeSouth Beach Kudya zvikafu zvakadzama zvine macalorie ayo akanaka mukuravira uye anotarisa pazvikafu zvine hutano.
5. Ita Chokwadi Kuti Ugare Zvakakodzera
Kuchengetedza mamiriro akanaka ndeimwe yemazano akanakisa evarume nevakadzi andakambowana se wiricheya mushandisi.
Asi nei izvi zvichikosha?
Kugadzikana kwakanaka kunodzora kushushikana panhengo dzemuviri uye kunobatsira kudzivirira kunetseka pahudyu dzako, saka unonzwa wakasununguka. Chimiro chakanaka chinodzivirirawo kukuvara uye chinoita kuti zvive nyore kwauri maneja dzako wiricheya zvakasununguka.
Kuti uite izvi, chikamu chimwe nechimwe chemuviri wako chinofanira kuenderana kubva kumusoro kusvika kumusoro. Fungidzira tambo yakatwasuka yakatwasuka pasi peti yako.
Gadzira chigaro chako zvinoshamisira zvakanyanya kuburikidza nechigaro chakagadziriswa kumashure uye chigaro chakagadzirwa ne ergonomic, icho chinobatsira mukuchengetedza mamiriro akanaka uye zvinopa zvakanaka tsigiro. Hatisi pakati pekuita hutano wiricheya mushandisi.
6. Kudzivisa Kumanikidza Maronda
Dzimwe nguva, maronda ekudzvinyirira anogona kunge akashata uye anogona kukusiya kunze kwekuita uye kurara pamubhedha kweinopfuura mwedzi mishoma - kana kutonyanya. Vanogonawo kuva kutyisidzira hupenyu kana hutachiona hwapinda. Imwe yemazano mashoma ehutano kubatsira kuyedza nekudzivirira maronda ekudzvinyirira ndeyekuchinja nzvimbo yako yekugara nguva dzose. Kana iwe usingakwanise kuzvifambisa mu wiricheya, edza kutsvaga zvimwe rubatsiro mukufamba kanenge kamwe chete paawa yega kungoparadzira kumanikidza kune dzimwe nzvimbo dzemuviri wako.
Patent S-Shape zvigaro
Tenga kumanikidza-kurerutsa mhepo pamhepo yako wiricheya, iyo isingori yakasununguka chete asi inogona kubatsira mukati kudzivirira maronda iwayo anotyisa.
Gara muErgonomic Wiricheya Nhasi!
7. Gara uchigeza nguva dzose uye chengetedza hutsanana
A chinodiwa chinodiwa yemuviri wemunhu ndeyekugeza nguva dzose, kamwe chete pazuva. Hutano uye kugara zvakanaka kwemunhu chero upi zvake zvinochengetedzwa kuburikidza nehutsanana uye hutsanana. Izvo zvakatowanda zvakakosha kumunhu anoshandisa wiricheya kugeza zuva nezuva. Zvakawanda vanoshandisa wiricheya dzivisa kugeza zuva rega rega kubvira kwavo wiricheya haina mvura, uye kukumbira rubatsiro kubva kumuchengeti kunopinda mune zvavo zvakavanzika. Izvo zvakakosha zvakanyanya kune yega yega wiricheya mushandisi kutora Wiricheya isina mvura chifukidziro kana piro, saka haizove chikonzero chekusvetuka shawa mazuva ese.
8. Edza Kudzivisa Doro zvakanyanya se zvinogoneka kusimudzira hutano
Kunwa doro hakuna kunaka kune chero pfungwa kana muviri wemunhu uye zvakatonyanya kuipa kune avo vedu varimo mavhiripu.
Doro rinoshungurudza iro rakabatana nehutano hwepfungwa uye nekumwa; zvinogona kukonzeresa nekusingaperi kwematambudziko ehutano hwepanyama uye hwepfungwa.
Kunze kwenjodzi kune chiropa uye nemoyo system, doro rinosanganisirwa nezvirwere zvakakomba sekenza uye mhando-2 chirwere cheshuga, zvese izvo zvatisingakwanise kukanganisa nazvo.
Kuchengetedza chiyero chakanaka kwakashata kudikanwa kuti uite shanduko dzakachengeteka kubva uye kuenda ku wiricheya, uye ichi ndicho chinhu chekutanga chinokanganiswa pandinonwa.
Vanhu "vanofambisa" macheya emagetsi kana scooter vakapomerwa mhosva yekutyaira pasi pesimba sezvo iyi iriwo nyaya yepamutemo. Iwe unoda kudzivirira kunyadziswa, kudhura, kana kurasikirwa ne "mavhiri" ako.
9. Iva Nehutano Hwepfungwa izvo zvinoshandura kuita hutano wiricheya mushandisi
Utano hwepfungwa uye hwepanyama hwakabatana zvakananga kune mumwe nemumwe. Vanhu vazhinji vanoona kuora mwoyo uye vanotanga kunzwa kusakosha nekuti havakwanisi kuzviitira zvinhu zvakawanda sevamwe vanhu. Ivo vanogona zvakare kusangana nekushushikana. Hutano uhu mamiriro vanobatwa nemazano akakodzera uye nemishonga. Naizvozvo, izvo yakakosha kubvunza nyanzvi kana Chiremba kana mumwe ari kusangana nechimwe chezviratidzo izvi.
Fluids kune hutano hwako
Chekupedzisira, kuwedzera kwekudya kwemvura kunobatsira nekushanda kwehuropi uye hutano hwakakwana. Pamusoro peizvi, kucheka pane fizzy zvinwiwa uye kuwedzera kunwa kwemvura zvakare zvinopa utano zvinobatsira uye inogona kubatsira mukurema. Kuwedzeredza huwandu hwemvura yako nguva nenguva kunogona kubatsira munguva dzekurwara. Kuvimbisa kunwa mvura zvine hutano kunogona kubatsira kukurumidza maitiro ekudzosa kana uri kutambura neimwe nzira yehutachiona kana hutachiona. Izvi zvinoputira yedu runyorwa rwekuti uve hutano sei wiricheya mushandisi.
Ndinovimba, aya matipi ehutano akareruka ave ekumwe kushandiswa kwauri. Aya angori mavambo ekuti uve hutano sei wiricheya mushandisi. Gadzira yako pachako runyorwa. Ita kuti zvive zvakanaka! Ingoziva kuti hazvisi zvese zvaunoverenga zvinozo shanda kwauri sezvo munhu wese akasiyana. Kunzwisisa muviri wako uye kutsvaga zvinonyanya kushanda mumamiriro ako ezvinhu ndiyo kiyi yekugara uine hutano. Rombo rakanaka!
Kurasikirwa nehuremu Kune Vashandisi veWiricheya
Kugara Uine Hutano muWheelchair: Chengetedza Flu kubva pakuKuziva Iwe
kupinda Izvi re muna Mawiricheya asingaremi, Retail, hwiricheya, Wiricheya Nhau, kufamba newiricheya uye tagged kuremara, isina kurema wheelchair, asingaremi mawiricheya, kufamba, wiricheya, nhau dzewiricheya, mavhiripu.